Fihibohana, fiafiana, fisolokiana: «Fotoana fitodihana amin’ny niaviana izao», hoy i Brentch | NewsMada
Fihibohana, fiafiana, fisolokiana: «Fotoana fitodihana amin’ny niaviana izao», hoy i Brentch
Sahirana izao tontolo izao! Ireo firenena heverina fa ma­nana ny ampy aza mikaikaika ny mponina ao aminy noho ny valanaretina. Tahaka izany koa ny eto Madagasikara. Voatery mihiboka, miafy, misoloky, mivaro-pananana, sns, ny sasany amin’ny Malagasy. “Fo­toana izao ahatsiarovana ilay tany niaviana sy nahabe izay nilaozana ho aty an-dRe­ni­vohitra hitady fivelomana heverina ho moramora”, hoy ny mpanakanto (mpanoratra, mpanao hosodoko, mpanao lamaody…) Brentch Mbola­ma­soandro.Nohamafisiny fa “fotoana izao hahatsiarovana fa tsy tokony ho nomena lamosina ny niaviana raha vao hary elatra. Tsy sanatria rehefa modimandry vao hoentina hiverina any” Nambarany fa efa nisy tokoa ny niverina any amin’ny tanindrazany raha vao nanomboka ny fihibohana ka efa hioty ny vokatry ny fambolena sy fiompiana nataony, atsy ho atsy”. Kolontsaina anisan’ny mampiavaka ny Mala­gasy io fitiavana ilay tany niaviana io.
Amin’ny maha olom-pirenena miaina anaty fiarahamonina azy kosa no nilazan’i Brentch Mbolamasoandro fa “nihamaro tamin’ireo tsy nahita hevitra madio no nahavita nisoloky olona maro tao anatin’izay fihibohana izay”. Vanim-potoana ahafahana ma­n­dini-tena ny fihibohana, raha ny fanazavany hatrany. “Ary tokony hianatra hifehy tena ny tsirairay… Tsy hiandry ny tsy azo anoharana vao hanao ny tokony hataony”, hoy izy.
Nampifamatoran’i Brentch amin’ny kolontsaina malagasy kosa ny fiatrehana ny coronavirus, ankehitriny ka nilazany hoe: “aoka re mba hifanaja, samy handray ny andraikitra sy anjara tandrify azy ny tsirairay. Mamafy hatsarana sy hitodika amin’Andriamanitra Andriananahary ka tsy hifanao ratsy!”.